कोभीड-१९ः महामारी इटालीमा के कारणले व्यापक भयो? - Nepal Readers
Home » कोभीड-१९ः महामारी इटालीमा के कारणले व्यापक भयो?
कोभीड-१९ः महामारी इटालीमा के कारणले व्यापक भयो?
in मुख्य समाचार, यो हप्ता, समाचार, स्वास्थ्य /शिक्षा
सम्पादकीय टिप्पणी: यस लेखमा इटालीमा गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ यातायात आशिंक बन्दले कोभिड–१९ को रोकथाममा सहयोग गर्न नसकेको एक अनुभव छ। यसमा इटाली कहाँनेर चुक्यो सो बारे प्रष्ट गर्न खोजिएको छ। यो नेपालका मामलामा पनि प्राशङ्गिक हुनसक्ने ठानिएकाले प्रस्तुत छ।
जनवरी ३१ मा इटाली सरकारले कोभिड–१९ महामारीका कारण देखाएर चीनबाट आउने सबै प्रत्यक्ष उडानहरू स्थगित गर्ने घोषणा गर्‍यो, त्यसबेला इटालीमा कोरोनाभाइरसका दुई मात्र बिमारीहरू देखा परेका थिए। चीनसँग प्रत्यक्ष उडान बन्द गरेको एक महिना पछि, कोभिड- १९ का विमारीहरुको संख्यामा नाटकीय रूपमा बृद्धि भएको छ, यसरी ३ मार्चसम्म इटालीमा २,०३० भन्दा बढी विरामीहरु दर्ता भइसकेका छन्।
वास्तवमा इटालीमा महामारी व्यापक के कारणले भयो? किन एशिया महादेश भन्दा बाहिर इटालीमा सबैभन्दा बढी प्रसारण भयो?
शेन्जेन सम्झौताको एक हस्ताक्षरकर्ता भएकाले, इटालीबाट अधिकांश युरोपियन देशहरूमा निर्वाध अवतजावत हुन सक्छ। जब कोभिड–१९ महामारी इटालीमा भित्रिएको आशंका चल्यो, त्यसपछि जनवरी ३१ देखि इटालीले चीनबाट हुने सिधा हवाइसेवामा प्रतिबन्ध लगायो। यसले घर फर्कन चाहने हजारौं इटाली र चिनियाँ यात्रीहरुलाई गम्भीर समस्या र चिन्ता बन्यो तर सो प्रतिबन्ध तर्कसंगत र सोचविचारयुक्त विकल्प हुन सकेन।
त्यसमाथि, इटालीले चीनका उडानहरूलाई बन्द गरेपनि, चीनबाट आउने यात्रुहरु अझै पनि तेस्रो गन्तव्यहरूबाट आउने गरिरहेका नै छन्। चीनबाट आएको उडान वा चीनबाट आएका व्यक्तिहरूलाई आउन नदिएर होइन समस्यालाई नियन्त्रणमा लिन शेन्जेन क्षेत्रका सबै देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूमा वचावटका उपायहरु संयुक्तरूपमा अपनाउनु पर्थ्यो। तर चीनले भने प्रभावकारीरुपमा वचावटका उपायहरु अपनाइरहेको थियो र छ पनि।
यसका साथसाथै, इटलीमा अनुहारमा मास्क लगाउनु सामान्य बानी मानिदैन। रुघाखोकी लाग्दा वा सामान्य विरामी पर्दा पनि मास्क लगाउने चलन छैन। यदि कुनै व्यक्तिले अनुहारमा मास्क लगाएर सडकमा निस्केको छ भने ऊ क्यान्सर वा अन्य गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भएको व्यक्ति मानिन्छ। तर, धेरै एशियाली समाजहरूमा मास्क लगाउनु सामान्य हो, तर इटालीमा यो दुर्लभ छ।
इटालीका कोभीड–१९ का धेरै विरामीहरु यस्ता छन् ती व्यक्तिहरू कहिल्यै चीनमा आएका थिएनन् वा चीनियासँग सम्पर्क राखेका थिएनन्। यसको मतलव उत्तरी इटालीमा कोभिड–१९ का विरामी पहिचान गरिनु धेरै हप्ता अघि नै थिए र ती व्यक्तिहरु आफूलाई सामान्य रुघामर्गी लागेको भनेर ढुक्क थिए।
यी दुई कारणहरू नै हुन् जसले गर्दा एसिया बाहिर इटाली सबैभन्दा बढी प्रभावित देश बन्न गयो। हालको चरणमा, यदि इटालियन राजनीतिज्ञहरूले कोभिड–१९ को व्यापक प्रसारलाई रोक्न तत्काल कदम चालेनन् भने इटाली, र यूरोपभरि र यसका वरपर समस्याले विकराल रुप लिनेछ। केही इटाली नागरिकहरुले इटालीमा रहेका विदेशी चिनियाँ समुदायलाई शारीरिक र मौखिक दुर्व्यवहार गर्न र पीडा दिन पनि थालेका छन् जस्तो बेलायतमा भइसकेकोछ।
धेरै दिन अगाडि इटालीको उत्तरपश्चिम क्षेत्रको भेनेटोका गभर्नर लुका जाइयाले भने – कोभिड १९ चिनियाँहरुबाट भएको हो किनभने उनीहरूकहाँ फोहोरी आनीबानी र जिउँदै मूसा खाने सांस्कृतिक प्रचलनहरू छन्। त्यस्ता भ्रामक र जातीवादी कथनहरूले सबै चिनियाँ मानिसहरूलाई अपमान गर्दछन् र यो विषय क्षमायोग्य होइन।
अब इटालीका साथै अन्य राष्ट्रहरूमा पनि सामूहिक सार्वजनिक सुरक्षा र सामाजिक शान्तिसुव्यवस्था कायम गरिनु आवश्यक छ। एक भूमण्डलीकृत संसारमा, हामी वैश्विक रोगहरूसँग लड्ने उपायको रूपमा प्रत्यक्ष उडानहरूलाई स्थगित गर्नेबारे सोच्न सक्दैनौं। अब इटाली र अन्य राष्ट्रहरुले यस अदृश्य दुश्मनसँग लड्न प्रभावकारी र सुव्यवस्थित नीतिहरू कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ। यस्तो आपतकालिन अवस्थामा चीनको जस्तो एकताको भावनाबाट सबै कुरा सिकेर नीतिहरु लागू गरिनु पर्दछ।
हामी इटाली र अरु राष्ट्रहरुले इमान्दार भई भनौं – चिनियाँहरुलाई चिनियाँ भएको कारण उनीहरुसंग भेदभाव गरिने छैन। आउनुहोस् चीन ! इटाली आउनुहोस् 中国加油！意大利加油!
साभारः अलेक्स चानद्वारा लिखित मार्च ३, २०२० मा सिजिटिएनमा प्रसारित।